မွတ်စလင်ဆန့်ကျင့်ရေး ဘုန်းကြီးတွေကို မြန်မာအစိုးရ ကောင်းချီးပေး
The 2013 National Geographic Traveler Photo Contest.
BBC News - Rare sighting of snow leopards
From Pakiland,afailed state: Christian Mother to Languish in Prison for Two More Years
'Refugee' Demands Right to Bring 2nd Wife to Ireland By PATRICK COOPER, IrishCentral.com Staff Writer
Six Taliban Suffer Premature Detonation - Workplace accident
British laws and culture are going down the toilet!!
I take it that Communication and Multimedia Minister Ahmad Shabery Cheek is not aware of it. He is still new at BSAS (Bangunan Sultan Abdul Samad) although he once held more or less similiar portfolio under Tun Abdullah Ahmad Badawi's government.
I believe his predecessor Rais Yatim too did not realise it because no one ever brought it up to his attention. Sweeping things under the carpet has beenastandard practice of the civil servants, it seems.
Its about Radio TV Malaysia (RTM), the official electronic media of the government. Apart from disseminating news and information, it acts as the ruling party's propaganda machinery, especially during general election, by-elections and at times when certain government policies must reach the rakyat.
Its news section is most important. The content must reflect the government's vision.
'So far so good' for the Bahasa Malaysia and English news. Tamil news too. However, it was brought to my attention that the Mandarin News section has not been delivering the aspiration of Barisan Nasional, let alone feeding viewers with more pro-BN contents.
During the 13th general election, the team in charge of the Mandarin News did not carry out orders and instructions from the top. They hada'free hand', instead.
During the 15-day campaigning period, not many info reached the audience about the progress of BN 'war machinery'. The Mandarin New section instead gave too much publicity on foreign and other news, like what happened in Egypt, Syria, Jordan and Europe.
I don't want to name who are the people in control of the section but he did not follow order. He distant Mandarin News from info on general election, its campaigns and progress. A bigger space was given to the opposition, especially DAP.
I was told he received instruction to cover BN campaigns in Johore for his news section. However, he skipped the assignment and followed Lim Kit Siang's campaign. As his sister was also contesting forastate seat, he helped her and the DAP by providing the assistance and publicity. Yes, her sister won... and so did Lim Kit Siang.
It puzzles me how this guy and his team were allowed 'to campaign' for DAP from his studio, and the director-general of broadcasting was not aware of it!
I hope Ahmad Shabery attends to this matter before it becomesascab to RTM (but I was also told that the minister did nothing when told about it!). If the person in charge of the Mandarin News holds 'political immunity', then I can understand.
However, must we retain this kind of people at RTM and the ministry? It does not matter much if he works at other section but the news department should be monitored all the time to avoid it from being used for the opposition.
Let's wait for Ahmad Shabery's comment and action...
Posted: 30 Jun 2013 06:27 AM PDT
This was voiced by Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman inabilateral meeting with Myanmar's Foreign Minister Wunna Maung Lwin on the sideline of the 46th Asean Foreign Ministers Meeting (AMM) in Bandar Seri Begawan, Brunei which commenced yesterday.
A statement from the Asean-Malaysia National Secretariat, Foreign Affairs Ministry here said Anifah conveyed Malaysia's concerned on the ongoing violence, saying it had also affected neighbouring countries, including Malaysia.
Besides the 46th AMM, other meetings include Post-Ministerial Conferences (PMC), 20th Asean Regional Forum, Asean Plus Three Foreign Ministers' Meeting and the 3rd East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting.
"Pembantu rumah menyedari kehadiran perompak apabila melihat pintu depan terbuka tetapi dia tidak berani menentang mereka," katanya di sini, hari ini.
KJ's house burgled
Posted: 30 Jun 2013 05:40 AM PDT
ဆရာတော်က 'အနှီ ယောကျာ်းသည် ဆံကိုကား ပယ်၏။ သင်္ကန်းကား ၀တ်၏။ ပုံပန်းသွင်ပြင်အားဖြင့် သံဃာနှင့်ကား တူ၏။ သို့သော် ထိုယောကျာ်းသည် ရဟန်းတို့ စောင့်ထိန်းအပ်သော သိက္ခာပုဒ်တို့ကို မစောင့်စည်း။ လူတို့ကဲ့သို့ ပြုမူချင်၏။ လူတို့ကဲ့သို့ နေထိုင်ချင်၏။ ရဟန်းနှင့် မအပ်စပ်သော လူတို့၏ အရေးအရာ ကိစ္စများတွင် ၀င်ရောက် ပတ်သက်ချင်၏။ ထိုကဲ့သို့ လူနှင့် အလွန်တူချင်သော ယောကျာ်းမျိုးကို လူအဖြစ်သာ ဆက်ဆံရမည်' တဲ့။
Posted: 30 Jun 2013 12:24 AM PDT
ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဦးဝီရသူဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်က မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံရသူဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ "ဗမာဘင်လာဒင်"လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို မွတ်စလင်ဆိုင်မှာ ဈေးမ၀ယ်ဖို့ ၊ မွတ်စလင်နဲ့ လက်မထပ်ဖို့ ဦးဝီရသူက တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဗလီကျောင်းတွေကိုလည်း သူက "ရန်သူ့တပ်စခန်း"လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပါတယ်။
"ဦးဝီရသူရဲ့ တရားတွေက ဘာသာတရားတွေအကြား နားလည်မှုနဲ့ ချစ်ကြည်မှု တိုးမြှင့်ရေးအကြောင်းတွေပါပဲ"လို့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်က သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာမီဒီယာနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"ဦးဝီရသူဟာ ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှု လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး"လို့ ၀န်ကြီးက ဆိုပါတယ်။
ယခင် မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဆန်းဆင့်က ၉၆၉ ဦးဆောင်တဲ့ မွတ်စလင်စီးပွားရေး ဆန့်ကျင်မှုကို ဘာမှ မမှားသလို ရှုမြင်ပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ အခု ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေပါတယ်၊ ဒါကို ဘယ်သူမှ ရပ်တန့်လို့မရပါဘူး၊ ဒါဟာ စားသုံးသူရဲ့ သဘောဆန္ဒပဲလေ"
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း ၉၆၉ နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အမြင်ကို အချက်ပြပေးလိုက်ပါပြီ။ သမ္မတရုံးက ဒီအပေါ်မှာ မှတ်ချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် ဒီလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာ အငြင်းပွားမှုတွေ ကြီးထွားလာတဲ့အတွက် သမ္မတရုံးရဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ "၉၆၉"ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်္ကေတ ဖြစ်ပြီး၊ ဦးဝီရသူဟာ "ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော်တစ်ပါးသာ"ဖြစ်တယ်လို့ တုန့်ပြန်ပါတယ်။
"၉၆၉"ဂဏန်းဟာ ရတနာသုံးပါးကို ကိုယ်စားပြုထားတာပါလို့လည်း ဆိုရဲ့၊ အခြေတည်စ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ပျက်စီးစေမယ့် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ပဋိပက္ခတွေမှာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အားပေးအားမြှောက် အကာအကွယ်ပြုပေးနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပြန်တယ်။ ၉၆၉ ဆရာတော်တွေထဲမှာ နောက်ထပ်ထင်ရှားတာကတော့ ၀ိမလဘိဝံသဖြစ်တယ်။ သူက မွတ်စလင်တွေကို အကာအကွယ်မဲ့ အိမ်ထဲဝင်လာပြီး အိမ်သားတွေကို အလစ်သုတ်သွားတဲ့ ကျားသတ္တ၀ါနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောပါတယ်။
"စည်းမရှိ ကမ်းမရှိရင် ဒို့ဘာသာနဲ့ ဒို့သာသနာ ကွယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်၊ အခန့်မသင့်ရင် တိုင်းပြည်တောင်မှ ပျောက်သွားနိုင်တယ်"လို့ မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်တဲ့ တရားပွဲမှာ ဆရာတော်က တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ရဟန်းသံဃာတွေဟာ ရှုပ်ထွေးစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့ "ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး" မှာလည်း ဘုန်းကြီးများက အဓိကနေရာက ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာတုန်းက လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ သူ့ရဲ့အစိုးရအရာရှိကြီးတွေက ရဟန်းသံဃာတွေကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ ဦးသိန်းစိန်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီစဉ်တွေနဲ့ လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်၊ စုရုံခွင့်တွေ ဖွင့်ပေးသလို တိုင်းပြည်ရဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ၅ သိန်းပမာဏရှိတဲ့ သံဃာထုကိုလည်း လွတ်လပ်မှုပေးခဲ့တဲ့ အတွက် "၉၆၉"၀ါဒအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားများကို လှည့်လည်ဟောပြောခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။
"တစ်ချို့ လူတွေဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အလွန်စိတ်အားထက်သန်သလောက် တစ်ချို့ကျတော့လည်း မပြောင်းလဲချင်ဘူး" လို့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အနီးကပ်အကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးသိန်းက ရိုက်တာကို ပြောပါတယ်။ "ဒါကြောင့် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်ချို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေ အဲဒီဘက်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ်" လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
၉၆၉ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ၀ိမလဘိဝံသကတော့ "ဦးဇင်းတို့ကို ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ ဟောပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေက ဦးဇင်းတို့ကို ထောက်ခံနေတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။
"မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ကြီးထွားလာပြီး အစိုးရက ရပ်တန့်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူး"လို့ မွတ်စလင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမျိုးဝင်းက ဆိုပါတယ်။ သူက ၉၆၉ ကို အမေရိကန်နိုင်ငံက အစွန်းရောက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကေသုံးလုံးအဖွဲ့(Ku Klux Klan)နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောပါတယ်။
"သူတို့တွေဟာ ပြဿနာတွေဖြစ်အောင် ဟောပြောလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး"လို့ ၀န်ကြီးဆိုတယ်။ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များကလည်း အလားတူ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။
တချို့အာဏာပိုင်တွေက ဒီသင်္ကေတကို ကြည်ညိုကြပါတယ်။ ဒီနှစ် ဧပြီလအတွင်းမှာပဲ ပဲခူးတရားရုံးမှာ ပဋိပက္ခကာလအတွင်း ကွမ်းယာဆိုင်က ၉၆၉ စတေကာခွာတဲ့အမှုနဲ့ မွတ်စလင်တစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေထဲက "ဘာသာသာသနာ ညှိုးနွမ်းစေမှု"နဲ့ အရေးယူခဲ့တာပါ။
အဲဒီနောက်မှာတော့ "သာထွန်းပြန့်"ကနေ ဦးကျော်လွင်ရေးတဲ့ "ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် ရှင်သန်ခြင်း" စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် လောက်မှာ "အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ"ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရာမှာတော့ မျက်နှာဖုံးမှာ ၉၆၉ လိုဂိုကို အစောဆုံး စတင်သုံးစွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေရာမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ အကြောက်ရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ ရယ်မောနေတဲ့ပုံကိုလည်း ပြသထားပါတယ်။ ဦးကျော်လွင်ဟာ တခြား အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း ဖက်လည်းတကင်းရှိပါတယ်လို့ သူ့သားဖြစ်သူ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ အောင်လွင်ထွန်းက ဆိုပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ ဦးစောမောင်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ ဦးကျော်လွင်ဟာ "အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ"စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့လည်း ဘာသာရေးဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ဆုံလေ့ရှိပါတယ်။
"အကောင်းဆုံး ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ"စာအုပ်ဟာ တရားဝင်ပုံနှိပ်ခွင့်မရှိပေမယ့် အောင်လွင်ထွန်းက ပြန်လည်ထုတ်ဝေဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ "လူတော်တော်များများက ဒီစာအုပ်ကို တောင်းဆိုနေကြတယ်"လို့ သူကဆိုပါတယ်။ သူဟာ ဒီနေ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ထောက်ခံပါတယ်။ "ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ ခြံစည်းရိုးခတ်တာပါပဲ "လို့ သူကဆိုတယ်။
"ဦးဇင်းက တခြားဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့ သာသနာတိုးတက်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကို လုပ်နေတာပါ" လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၁ မှာ ၀ီရသူဟာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၉၆၉ စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့ "ဗမာဘင်လာဒင်"လို့ မှတ်ယူပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာ မွန်ပြည်နယ်က ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အင်အားကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အကြမ်းဖက်မှုတွေစဖြစ် ကတည်းက သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကို နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက မော်လမြိုင်က မွတ်စလင်ပိုင် ကားလိုင်းကို စတင်သပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်က တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဖြန့်ကျက်ပြီး သပိတ်မှောက်သွားဖို့ပဲ။
လက်ရှိ မွတ်စလင်စီးပွားရေးတွေကို ကန့်ကွက်တာတွေအားလုံးဟာ တရားမျှတပါတယ်လို့ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ၉၆၉ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ ရှေ့နေ ဇာနည်ဝင်းထွန်းက ဆိုပါတယ်။ "မွတ်စလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စီးပွားရေးကို ပိတ်ပင်လာတာကြာပြီ၊ ကျမတို့က စပြီး သပိတ်မှောက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျမတို့က သူတို့နည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်တာပဲ" လို့ ဆိုတယ်။
"ရန်ကုန်မြို့မြောက်ပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ မွတ်စလင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်တွေကိုဖျက်လိုက်ကြပြီး ၉၆၉ နောက်လိုက်တွေက သူတို့ရဲ့အဆောက်အအုံ ဆောက်ပြီးရင် လာဖျက်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး အကြောင်းပြပါတယ်"လို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မွတ်စလင်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူ ဦးရွှေမောင်က ဆိုပါတယ်။
"မြို့တစ်မြို့မှာ ဒါတွေစဖြစ်လာရင် တခြားမြို့ကိုပါ ကူးဆက်သွားမှာ စိုးပါတယ်"လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ကိုးခြောက်ကိုး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူ မဇာနည်ဝင်းထွန်းအတွက်ကတော့ မွတ်စလင်တွေကို ပိတ်ပင်တာဟာ လူမျိုးရေးငြိမ်းချမ်းမှုကိုသာ ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မိတ္ထီလာမှာ မွတ်စလင်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ စားသုံးသူကြား အငြင်းပွားရာကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ပဋိပက္ခကို သူမက လက်ညှိးထိုးပြပါတယ်။ "တကယ်လို့ သူတို့ဟာ ကိုယ့်လူမျိုးဆိုင်မှာသာ ၀ယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပြဿာနာတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး" လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်က ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဝိမာလက နောက်လိုက်ဘုန်းကြီးတွေ ဝေဖန်မှာကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ "ဦးဇင်းတို့ ကောင်းတာလုပ်နေတာကို သူတို့ ရပ်တန့်ဖို့ မကြိုးစားသင့်ဘူး"လို့ မိန့်ပါတယ်။
"၉၆၉ ဟာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အမြဲတမ်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ"
"မြို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ NLD ပါတီကို လေ့လာကြည့်ရင် မုတ်ဆိတ်နဲ့လူတွေကို တွေ့ရလိမ့်မယ်"လို့ ဦးဝီရသူက ဆိုပါတယ်။
ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းကတော့ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ NLD ပါတီဝင်အချို့ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ "ဒါပေမယ့် ပါတီဝင်တွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့အခွင့်ရေးကို NLD အနေနဲ့ ကြားဝင်စွက်ဖက်ဖို့ မရှိပါဘူး၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ သူတို့ဘာသာ သူတို့ လွတ်လွတ်လပ် လပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်"လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။
နောက်တစ်လမှာတော့ ဦးဝိမလနဲ့ အခြား မွန်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာ သာကေတကို သွားရောက်ပြီး ၉၆၉ တရားတွေ သုံးရက်တိုင်ဟောပြောပြီး "ဓမ္မဆေး"လို့ အမည်ပေးတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ "တိုက်ခိုက်ဖို့ အရှုံးမပေးနဲ့"လို့ လက်ကမ်းစာစောင်မှာ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
"အခုတော့ အဲဒီကျောင်းကို ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီး ရဲတွေ အစောင့်ချထားတယ်၊ လူတွေက ဒီမှာ ဗလီရှိတာ မလိုချင်ဘူး"လို့ မင်းသက်လင်းက ပြောပါတယ်။
Posted: 29 Jun 2013 10:00 PM PDT
I have always enjoyed viewing fantastic photographs that showcase magnificent and spectacular scenes of nature and/or wildlife. Had I been richer in resources, I would have invested in good cameras and lens.
Viewing the entries from the Nat Geo Traveler's 25th Annual Contest filleda me with much awe in jaw-dropped stance.
CLICK HERE to enjoy the spectacular shots.
Posted: 29 Jun 2013 07:52 PM PDT
Have you heard of Patrick Cashin's photography? He's famous in Flickr and his most popular shots have garnered hundreds of thousands of views. It is unusua that anyone would want to focus on suchalimited subject - dark, dirty scenes of New York City – but unlike others who photograph what anyone can see, only Cashin makes the effort to show us what is going on beneath the surface because he is the official photographer for New York City's Metropolitan Transportation Authority. Hence, he documents processes that few would ever getachance to witness in their lives.
Posted: 29 Jun 2013 08:15 PM PDT
Posted: 29 Jun 2013 04:53 PM PDT
Protesters hold up placards while demanding the release of Asia Bibi atarally in Lahore November 21, 2010. PHOTO: REUTERS/FILE
Some two-and-a-half years later, Bibi is waiting foradate to be fixed for the hearing of her appeal. The court hasalarge backlog of cases and is currently hearing appeals filed at the end of 2008 and beginning of 2009. Appeals filed at the end of 2010 are due to come up in 2015. Continue here for the whole article....
"Ireland discriminates against Muslims seeking citizenship by asking them to sign an affidavit. The state should not be interfering in families like this. It is silent on adulterous affairs but the moment you try and do something honourable by bringingawoman intoamarriage, evenapolygamous marriage, there is an issue. Continue here to the whole article....
Posted: 29 Jun 2013 04:58 PM PDT
KABUL – Six Taliban accidentally blew themselves up with their own bombs June 27 in separate incidents, Bakhtar News Agency reported, citing an Afghan Interior Ministry statement.They were trying to plant bombs to target security forces, but the devices detonated prematurely, the statement said.The incidents occurred in the Tanay District of Khost Province, the Zankhan District of Ghazni Province and the Zhamkani District of Paktia Province. Central Asia Online
Posted: 29 Jun 2013 04:41 PM PDT
Another victim of the new Egypt-run worldwide terrorist organization and father of al-Qaeda and Hamas, the Muslim Brotherhood. The genocide of non-Muslims have dramatically increased under Morsi. Over 100,000 Christians have been slaughtered per year on Muslim Brotherhood initiatives. The rebel extremists encouraged by the Muslim Brotherhood are forcing themselves into Syria. Syria in return is another vicious nation. They're all the same.
This innocent Syrian woman was killed for being caught withabeer. She was then tied up with her ID card placed by her feet to identify her, put next toasign asking people to spit on her. Must make Barack Hussein and the evil conglomerate retards in Brussels proud. A beer is all her life was worth. She was an unknown mother, wife, sister.
Don't allow your tax money to pay for this evil. Their funding of Egypt funds the Muslim Brotherhood. The provision of weapons and military support is only supporting terrorists ('rebels') and is pure EVIL. Demand that Europe, Canada. Australia, U.S. – the entire Western world ban and stop all trade with Middle Eastern countries. Stop the oil trade, stop them from investing in the West and making more money through us. Their savaged evil never ends. There is no foreign policy behind their savagery. They have behaved the same for 14 centuries. And it will continue for another 14 centuries. Our participation and association makes us equally responsible for their savagery and does nothing but import Muslims and asylum seekers into our own countries – and bring the problems to our shores. From Muslim Issue
Posted: 29 Jun 2013 04:05 PM PDT
Absolutely disgusting... How on earth can they be arrested for trying to doacharity walk and yet there are groups who wish death and spew hatred for hours and hours on marches and they are not allowed to be stopped. I truly fear for my children, as in 10yrs time, British﻿ people we will be ruled by people who are everything but British: From Jihad Watch